Dowlada somalia oo C/kariin Qalbi dhagax ku tilmaantay inuu halis ku amniga dalka. | Raascawad
Dowlada somalia oo C/kariin Qalbi dhagax ku tilmaantay inuu halis ku amniga dalka.
Muqdisho(Raascawad Media)_Kadib kulan deg deg ah oo maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada xukuumada federaalka ah ee Soomaaliya ayey war cad ka soo saareen gacan gelinta C/kariin Qalbi dhagax oo ahaa sarkaal ka tirsan urur ONLF.
Wasiirka amniga dowlada Soomaaliya oo halkaasi ka jeediyey qudbad ku aadan xaaladaha amniga ee dalka ayaa tilmaamay in laamaha amniga ay ka hor tagayaan wax kasta oo halis gelin kara amniga dalka.
Ra,iisul wasaaraha Soomaaliya shirkaasi gudoominayey ayaa sheegay in Itoobiya iyo Soomaaliya ay hore ugu heshiiyeen iskaashiga dhinaca amniga,isagoo xusay in Qalbi dhagax oo ka tirsanaa ururada argagixisada isla markaana uu doonayey in dalka uu ka abuuro qal qal la xiriira dhinaca ammaanka.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa dadka Soomaalida ah ay si weyn u hadal hayeen talaabada dowlada federaalka ah ee somaliya ay Itoobiya ugu gacan gelisay C/kariin Qalbi dhagax oo ka tirsanaa jabhada ONLF oo lagu qabtay magaalada Gaalkacyo